ODUU NYAAPHAA FASHALEESSUU!!!! -
ODUU NYAAPHAA FASHALEESSUU!!!!
Akkuma beekamu nyaaphni karaa hedduun namairratti duulti. Kana keessaa tokko oduu. Yeroo ammaa kana oduun meeshaa qabsoo guddaa tahee jira. Oduun nama rukutuun gooluun, jeequun, kuffisuu. Kunis qabsoo karaa salphaati.
Nuti ammo kan gochuu qabnu; fira keenna fi nyaapha keenya sirritti addaan baasuu qabna. Fira keenna kan gaarii nuuf dubbatuuf sammuu keenna banaa goonee hubachuudha; wol dhageeffachuudha; woliin qabsotti bobba’uudha. Nyaaphonni keenna alagummaa isaanitiif waan ofii yakkan nutti maxxansuuf tattaafatan. Halkanii guyyaatti humna isaanii bobbaasanii odeessaa oolan; gochaa diinummaas fudhatan. Ofii gaarii of fakkeessuuf wama ofii yakkaniin nama wonjalan. Kanaaf yeroo nyaaphi kijiba nurratti odeessu rifachuu hin qabnu; mataa keenya jalaa cufaa gochuun jagnummaa keennaan injifachuu qabaanna. Alagaan abdii nu kutachiisuuf dhagaa fi muka nurratti darbata. Kana itti dammaqnee fashalsuu qabaanna. Kaayyoon isaa nu busheessee of mi’eessuudha amma fashalee uummanni hundi isa jibbe malee!!!!!!!!!!!!Jibbamee tufame!!! Uummata biratti isa osoo hin taane nutu jaalatama; nyaaphni homa barate dalagaa jira.
Kana hunda kan dalaguuf qabeenyaa uummataa saamee jiraachuuf. Soba diinni keenna odeessuammoo harkaa harkatti; fuulaa fuulatti fashalsuu qabaanna. Nyaaphni oduu piroppaagaandaa sobaa guddaa baneejira. Kana osoo addaan hinkunne karaa namoota ijaareetiin hafarsa. Yakkoota hedduu ofumaa hojjatee ittiin nama wanjala! Piroppaagaandaa sobaa namoota dhuunfaa sabboontota ta’ee; mormitoota hunda irratti bane! Kanaaf nullee iddoo kamittillee, yeroo kamillee, haala kamiinille fashalsuu qabaanna.
Dhugaan hin qallatti malee hin cittu!
Aangoon isaanii hirriba muka gubbaati!
Jabaataa oolii duuti waan hin hafne! (Bararaa oolii allaattii reeffi lafa!)
Waa shan booda waa’ee/rakkoo shantu jira: 1.Hanga feete beelayii nyaadhu quuftee lubbuu si dhayaa. 2. Hanga feete; akka feete dubbadhu ni nuffamtaa; 3.Hanga feete gammadi gaafa tokko ni naataa; 4. Hanga feete ijaari moofee diigamaa; 5. Hanga feete jeraadhu ni duutaa!!!!
Nyaaphni soba odeessaa
Oduun isaa karaa si balleessaa!
Galmi isaa dhokataa
Kan hubatu hubataa!!
Galma isaa dhokfatee eessa galaa
Hunduu itti baree amma isuma saaxilaa
Isatu fidee rakkoo fi balaa
Sabni guutuun kunoo isa maalalaa!!!!
Anillee isuma maalalee
Isumas heddu saaxilee!!
Kijiba nyaaphaa eennu fudhataa
Isumatu itti salphataa
Heddu sobanii afaan dadhabee
Dubbiin walfallessu afaan isaan qabee!
Wallaalanii waan jedhan
Qalamaan akka itti kataban
Hedduu hedduu of busheessan!!
Hojiinis bitaa itti galee
Sabni hunduu maalalee
Waa’ee guddinna odeessuu ofii beelaa
Aaddunyaa mara isaan maalalaa
Dhara rabbi itti haa buusu balaa!!!!
Previous Ajjeesanii Gadda Labsuun Aadaa Wayyaanee ti!.
Next (Garee ABO Galaasaa Dilboo) ****** Waamicha Walgahii ****** Oromoota UK keessaa jiraattan Maraaf